ICJ oo maanta shaacineysa natiijada kiiska BADDA - Waa sidee rajada Somalia? - Caasimada Online
Home Badda ICJ oo maanta shaacineysa natiijada kiiska BADDA – Waa sidee rajada Somalia?
ICJ oo maanta shaacineysa natiijada kiiska BADDA – Waa sidee rajada Somalia?
Hague (Caasimada Online) – Maxkamada cadaaladda aduunka ee ICJ ayaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta oo ku beegan 12-ka October inay ku dhowaaqdo go’aankeeda kama dambeysta ah dacwadda badda Soomaaliya ee ay muranka gelisay dowladda Kenya.
ICJ ayaa natiijada shaacineyso 4:00 galabnimo, waxaana haatan xarunta maxkamadda oo ku taalla Hague ku sugan wafdi ka socda Soomaaliya, isla-markaana uu horkayaco ra’iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Mudane Mahadi Maxamed Guuleed (Khadar).
Soomaaliya ayaa aad ugu rajo weyn inay ku guuleysato dacwaddan, iyada oo xeer ilaaliyaha qaranka oo goobjoog noqon doono ICJ uu niyad wanaag muujiyey.
“Waxaan ku niyad samahay in àan guulaysanayno haddii alle idmo,” ayuu yiri Xeer Ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Sulleymaan Maxamed Maxamuud.
Dhankiisa xeer ilaaliyihii hore ee Qaranka Axmed Cali Daahir oo la hadlay VOA-da ayaa sharraxaad ka bixiyey heerarka ay soo martay dacwadda oo ay diidmo ka keentay Kenya.
“Kenya oo dhowr jeer laga dalbaday soo gudbinta caddeymo waxa ay uga falcelisay waraaqo diidmo ah, kiiskaan waxa uu soo maray heerar kala duwan” ayuu yiri Axmed Cali Daahir.
Dooda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo bilaabatay bishii August ee 2014-kii, xilligaas oo ay dowladdii Xasan Sheekh ICJ u gudbisay dacwadda kala dhexeysa Kenya.
Si kastaba, xukuumadda Nairobi oo quus ka taagan dacwadda badda ayaa maalmo, ka hor shaacisay in aysan aqoonsan doonin go’aanka la filayo inuu kasoo baxayo maxkamadda ICJ, waxaana hadalkaas uu noqday mid lama filaan ah oo ku soo aaday, xilli xasaasi ah.